‘लालटिन’ बल्दा यति सेक्सी प्रियङ्का ! (भिडियो सहित) - inaruwaonline.com
‘लालटिन’ बल्दा यति सेक्सी प्रियङ्का ! (भिडियो सहित)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर ०३, २०७३ समय: ५:३१:२८
३ मंसिर, काठमाडौँ । निर्माणाधिन चलचित्र ‘लालटिन’को एक गीतको लिरिकल भिडियो हालै सार्वजनिक गरिएको छ । फिल्ममा मुख्य अभिनेत्रीको रुपमा रहेकी प्रियङ्कालाई यो गीतको भिडियोमा निक्कै हट र सेक्सी अवतारमा देखाइएको छ ।
स्टील फोटोलाई नै भिडियोलाइज गरिएको यो दृश्यमा प्रियङ्काको पार्टी गीत हो भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । गीतको भिडियोमा फिल्मका केही दृश्य भने देखाइएको छ । पार्टी गीतमा अभिनय गरेकी प्रियङ्का कार्कीलाई निक्कै कामुक अवतारमा देखाइएको छ ।
किरण माइकलको सङ्गीतमा तयार भएको यो ‘चमेली…’ बोलको गीतलाई आस्था राउतले स्वर दिएकी हुन् । गीतको भिडियोमा कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी रहेको छ ।
फिल्ममा दयाहाङ राई, प्रियङ्का कार्की, केकी अधिकारी, अर्जुनजंग शाही, मेलिना मानन्धर लगायतको मुख्य भूमिका रहेको बताइएको छ । एमसन पिक्चर्स भानुप्रतापको प्रस्तुती रहेको यो फिल्मलाई अनिम श्रेष्ठ र राज केसीले निर्माण गरेका हुन् ।